Mapurisa anoshandisa mvumo yekurarama pavaratidziri muBrest -
Mapurisa akashandisa mvumo yepamoyo paakarwiswa panguva yekuratidzira muBelarus, maererano neInterior Ministry.
Sezvo ruzivo rwezvakaitika muguta rekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweBrest, United Nations yakashora kushandiswa kwechisimba nezviremera.
Mutaundi reGomel, murume akafa mushure mekusungwa nekuchengetwa muvheti yemapurisa, kufa kwechipiri mukusagadzikana.
Varatidziri vakapomera mapurisa hutsinye zvichitevera kusarudzwa kwakaitwa mutungamiri weSvondo.
Kuratidzira uku kwakatanga kwapera maawa mushure mekunge mutungamiri weBelarusian Alexander Lukashenko anonzi anohwina muvhoti, uyo wakapihwa mhosva neEU sekuti "sununguka kana kurongeka". Mumiriri mukuru anopikisa, Svetlana Tikhanovskaya, akazosungwa asati atizira kuLithuania yakavakidzana.
Vanenge mazana maviri emadhiza akakuvara, vamwe zvakakomba, uye zviuru mazana matanhatu vakasungwa. Vashandi veBBC vakapwiswa nemapurisa neChipiri manheru.
Mukuru wekodzero dzevanhu weUN Michelle Bachelet akataura izvozvo Mishumo yakakurudzira "maitiro ekusungwa kwevakawanda mukutyora zvakaipisisa kodzero dzenyika" .
EU "kufunga nezve masanctions"
Lukashenko akakunda 80% yevhoti yeSvondo, sekureva kwemakurukota esarudzo, asi paine humbowo hwakawanda hwekuvhota. Mukuru wezvekunze weEU, Josep Borrell akati maBelarusians airatidza "chishuvo chekushandurwa kweruzhinji" panguva yekutsvaga sarudzo.
Mutungamiri weLithuania, Gintanas Nausea akati Lithuania, Poland neLatvia vakagadzirira kuita basa rekuyananisa, chero zviremera zveBelarusian zvichamisa mhirizhonga kune vanopokana, kusunungura varatidziri voita kanzuru yenyika ine nhengo zveruzhinji. Imwe nzira, akanyevera, yaive yekurangwa.
Amai Tikhanovskaya pavakaenda kukomiti inoona nezvesarudzo neMuvhuro manheru kunonyunyuta nezvezvabuda zvakamupa chikamu chegumi kubva muzana chevhoti, akasungwa kwemaawa manomwe. Chipiri mangwanani, akasvika kuLithuania.
Mr. Borrell vakapomera vane masimba nekushandisa "zvisizvo uye chisimba chisingabvumirwe".
muzvinambiriMapurisa eRiot akaonekwa achirova varatidziri munzvimbo dzinoverengeka dzeMinsk
Zuva rechina rekuratidzira
Mazana evakadzi vakapfeka zvichena uye vakabata maruva vakaenda kuMinsk neChitatu kunodaidzira kupera kwemhirizhonga yemapurisa. Boka revanopfuura zana rakaungana pamberi pejeri vakamirira nhau dzehukama hwavo vakasungwa.
NeChipiri manheru chete, mutauriri weInterior Ministry, Olga Chemodanova akati vanhu vanopfuura chiuru vakasungwa uye mapurisa akati wandei nemauto akakuvara panguva yekusagadzikana muguta. Minsk nemamwe maguta makuru.
MuBrest, mapurisa aive akanangwa ne "boka revagari vehasha vane masimbi mabara mumaoko"; "Pfuti dzakashandiswa kuchengetedza hupenyu nehutano hwevashandi," akadaro.
Hutsinye hwekupaza hwakashamisa vaiona. Nekudaro, pepanhau repamutemo reBelarusian Segodnya rakataura kuti "varongi" veratidzira ava vakasungwa, kusanganisira mugari weMinsk anonzi akaronga "kusagadzikana" kubva mukamuri rehotera.
Amai vemumwe muchengeti wemakore makumi maviri neshanu akafa muGomel nemusi weSvondo akaudza Radio Liberty kuti: "Vakaramba kundiratidza muviri. Ndofunga akarohwa zvakaipa. "
Vanoongorora vakati chakakonzera rufu hapana kujeka, sekureva kweAFP nhau agency. Vakuru vakuru vakambenge vataura kuti muratidzi akafa nemusi weMuvhuro pakaitwa mudziyo unoputika mumaoko ake.
Pane chiitiko muguta guru
Na Abdujalil Abdurasulov, BBC News, Minsk
MaPurotestendi akaungana nemusi weChipiri manheru padyo neKamenaya Gorka metro station iri pakati peMinsk, yakakurumidza kuchinja kuva nhandare yehondo yekuenderera mberi kurwiswa. Mapurisa akapfura misodzi yemisodzi uye magirovhoti vasati vayambuka mugwagwa vachisundira kumashure varatidziri.
Vamwe vanhu vakawa vachiedza kutiza, asi vakakurumidza kunhonga vamwe vachimhanya kumashure. Mapurisa akavadzingirira pachivanze chezvivakwa zvefurati apo vazhinji vakaedza kuvanda.
Pavaibata vanoratidzira vachitiza, mapurisa akavakomba nekuvarova zvakaipisisa nema baton. Vagari vakatarisa kubva kumahwindo avo vachizvirova uye nekutuka kumapurisa, vachishevedzera kuti vabve. Mumwe munhu akatokanda manera emapuranga kumapurisa ezvipenga avo vairova murume pasi pehwindo ravo.
Pakutanga yedu timu yeBritish yaive zvakare yakarwiswa nevarume vakapfeka zvevatema vanoita kunge mauto ekuchengetedza. "Bvisa kamera," vakashevedzera pavakanga vachiuya kwatiri. Takavaratidza kubvumidzwa kwedu nehurumende, asi mumwe wemauto akabvisa kadhi remumwe wedu kubva pamutsipa wake, ndokutora kamera yake, ndokuyedza kuipwanya.
Patakakumbira kuti gwaro rekubvumidzwa ridzoserwe kwatiri, mumwe wavo akakanda baton kwatiri nekamera yedu yakasara. Neraki, hapana mutezo weboka akakuvara zvakaipisisa uye kamera yakaramba yakadaro.
muzvinambiriVaratidziri vakapomera mhirizhonga mapurisa nehutsinye
Webhusaiti inopikisa Tut.by yakati vatori venhau vanga vachiitirwa mumaguta eBrest neGrodno, pamwe neguta guru. Vazhinji vakaona zvishandiso zvavo zvakaputswa kana kubiwa, uku Tut.by ichiti mutapi wayo uye cameraman ainongedzwa.
Lukashenko, makumi matanhatu nemasere, akatonga nyika yaimbova Soviet kubvira 65, adaidza vatsigiri vanopikisa "makwai" anodzorwa kubva kunze kwenyika. Iye zvakare akazoti vazhinji vevaratidziri ava havashande, Belta akataura, ndokuvaudza "kunze kwedare" kuti vatsvage basa.
Paive nenyaya dzevashandi pakurova, asi vezvenhau vakati idzi nhau dzenhema.
Mawebhusaiti, akavharirwa muBelarus kwemazuva, anonzi akanyanya kuunzwa online neChitatu mangwanani. Terevhizheni yenyika akataura zvishoma nezve kuratidzira uku.
Zvichakadaro, vatambi vanoverengeka vepaTV vakasiya basa zvichitevera vhoti. STV's Tanya Borodkina akati akamira nekuti "haachagona kunyemwerera pamhepo futi". "Usatya," akakurudzira maBelarusian paFacebook. “Musatorera vana vedu ramangwana ravo! "
Yevgeny Perlin naSergey Kozlovich, vese veBelarus 1 TV, zvakare vakati vakabata zviratidziro zvavo zvekare. "Chii chakaitika kuBelarus yangu?" Perlin akanyora paFacebook.
muzvinambiriMaProtestanti akadana zviremera zveBelarusian kuti vasashandise simba
Aimbove mudzidzisi Svetlana Tikhanovskaya, makumi matatu nematanhatu, aive ari pamba-pamusha kusvika apinda mujaho mushure mekunge murume wake asungwa uye arambidzwa kunyoresa kuvhota.
Sekutaura kwemumwe shamwari, Muzvare Tikhanovskaya vakadzingwa kubva kunze kwenyika sechibvumirano chekubvumidza kuburitswa kwemaneja wake wekuratidzira, Maria Moroz, uyo akasungwa neChishanu manheru.
Mushure mekusvika muLithuania, vhidhiyo yakaonekwa online umo akataura nevatsigiri (muRussia), achiti akange awedzera simba rake chairo.
"Ndafunga kuti mushandirapamwe uyu wakandisimbisa uye wakandipa simba rakawanda zvekuti ndikwanise kurarama chero chinhu," akadaro. “Asi ndinofunga ndichiri mukadzi asina kusimba wandaive.
Akawedzera kuti, "Hapana kana hupenyu hwani hunokosha pane zvirikuitika." “Vana zvinhu zvakakosha kwazvo muhupenyu hwedu. Ms Tikhanovskaya akange atumira vana vake kuLithuania kunochengetedza sarudzo dzisati dzaitwa.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://www.bbc.com/news/world-europe-53748748